Back Ice Pack, ikpere Kechie na Ice Pack, Cold Therapy Socks - Huanyi
Guzobe na 2012
Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ ọhụụ. Companylọ ọrụ ahụ etinyewo aka na mmepe nke gel ice pack ngwaahịa maka ịma mma nkeonwe / ahụike na ahụike / egwuregwu / egwuregwu ụlọ / nlekọta kwa ụbọchị na-eme ka ọgwụ na-ekpo ọkụ na oyi na-atụ site na 2012. Anyị na-enye ezumike, ọgwụgwọ anụ ahụ na enyemaka mbụ na ndụ, Ngwaahịa na-asambodo. na SGS, FDA, CE, REACH, AZO, PROP65, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nyocha BSCI, anyị nwere ahụmịhe jikọrọ LIDL, ALDI, Wal-mart na Disney.
Jiangsu Huanyi Industrial pụrụ iche na-ekpo ọkụ na oyi na-atụ jel ice mkpọ ubi ruo ọtụtụ afọ, anyị nwere ọtụtụ ahụmahụ ka omenala gị echiche n'ime ezigbo, nyere aka ike gị onwe gị na ngwaahịa na adabara ngwugwu ụzọ, niile mmepụta bụ 100% mgbali ule na 100% track usoro mmepụta. Ndị ahịa anyị niile bụ injinia ọkachamara, ị nwere ike ịgwa ha okwu gbasara echiche ọ bụla ma ọ bụ mgbe ọrụ ahịa gasịrị, otu onye maara nke kachasị, yabụ bụrụ enyi anyị, nwee ọ ourụ na ọrụ anyị site ugbu a.
nkịta jụrụ ute
Okwu Mmalite L w ọkpụrụkpụ Ibu M 40cm 30cn 1.0cm 700g L 50cm 40cm 1.0cm 1100g LL 60cm 50cm 1.0cm 1800g XL 90cm 50cm 1.0cm 2000g Na-agbadata usoro iwu nke izu oyi. Igwe ihe na-eme ka mmiri dị mma dị ka gel polymer na mmiri jụrụ oyi maka ụmụ ọhụrụ. Gel polymer nwere nnukwu mmiri nwere ike ịmị ọkụ nke ahụ mmadụ site na mpempe akwụkwọ na ịdabere na nnukwu mmekọrịta na mgbasa nke gel polymer ka ọ wee mepụta nke ọma okpomọkụ na-agbanwe na transferr ...
Okwu Mmalite Na-akwado ya - Nke a mmanya oyi uwe aka bụ ìhè, kọmpat, na-adaba adaba. Naanị were ya na picnic, ọdọ mmiri, ịma ụlọikwuu, ma ọ bụ ihe omume ọ bụla iji nwee obi ụtọ ma zuru ike na ihe ọ drinksụ drinksụ dị jụụ ọbụlagodi na-enweghị bọket ice. Ọ dị mfe iji – Tinye ọgwụ chiizler nke champeenu na friza maka ihe dị ka awa 2, ma bido na aka uwe iji zụọ mmanya ọ fastụ fastụ ngwa ngwa ma debe ha zuru oke oyi ruo ọtụtụ awa. Zuru okè iji na mmanya, biya, Champagne, wdg Ngwaahịa: 6.1 x 9.25 Inch Aha: Wine oyi akpa, ...
Okwu Mmalite Na-ekpo ọkụ na Nzuzo, Reusable, Ọ dịghị leakage, Ọgwụ na-adịghị egbu egbu: 19 * 9cm, 20 * 10cm, 22 * ​​11.5cm Arọ: 120g, 130g, 160g, 180g Ngwa Ejiri maka ọgwụgwọ na-ekpo ọkụ na oyi na-enyere aka ịkwụsị anya n'anya, anya puffy, ahụ erughị ala erughị ala, migraines, na-enye ọgwụ na-enweghị enyemaka. Enwere ike iji ya dị ka mkpuchi anya na-ekpuchi ọkụ na ụlọ ụlọ. Ọ na-egosi dịka nkpuchi, ọ nwere ike iji ya dị ka mkpuchi anya dị jụụ, mana amachila echiche gị. Ngwaahịa a bụ isi maka mkpakọ ọkụ ma ọ bụ oyi comp ...
Okwu Mmalite ọkụ na oyi - kidsmụaka ndị a gel ngwugwu ndị ọzọ n'etiti mpịakọta ọkụ na oyi, ha na-adị ngwa ifriizi ma dịkwa mfe iji. Debe ngwugwu ice ahụ n'ime mmiri ọkụ ma ọ bụ n'ime friza, ha nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa n'etiti okpomọkụ ma ga-ejigide okpomọkụ ma ọ bụ oyi maka ogologo oge na akwa pink pink. Nzuzo na-enyere aka na nrugharị ọbara, na-ebelata ọbara ọgbụgba na ọzịza. Okpomọkụ / Ọgwụ na-ekpo ọkụ na-enyere aka n'ịgba ọsọ ọbara na ịgwọ ọrịa, gbakee ngwa ngwa ...
Okwu Mmalite SOOTHING KNIN PAIN RELIEF: Icheta ihu na azụ nke ikpere na mkparịta ụka na-agbanwe agbanwe na ọgwụgwọ ọkụ ma ọ bụ oyi, nkedo ikpere oyi na-ebelata ọzịza, mgbu na mbufụt n'ihi ike ọgwụgwụ, mmerụ ahụ ma ọ bụ ịwa ahụ. Nkwonkwo ikpere dị nro na-enyekwa ahụ efe dị mma maka nkedo na nsogbu, ACL, ogbu na nkwonkwo, mmerụ egwuregwu, ịwa ahụ na ndị ọzọ. Na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi ọgwụgwọ: Gụnyere nke mbughari gel mkpọ maka ọgwụgwọ ọkụ ma ọ bụ oyi. Ngwunye ọ bụla na-adaba n'ime ...
Okwu Mmalite Nzuzo nwere ike belata nrughari ọbara, usoro oyi na-ebelata mgbasa, na-ebelata mbufụt, akwara na mgbu. Soro usoro Rice mgbe mmerụ ahụ gasịrị: Izu Ike: Zuo ike ma zere iji mpaghara merụrụ ahụ. Ice: Akpụrụ ebe merụrụ ahụ ozugbo enwere ike, nke a na-enyere aka belata mbufụt, ọbara ọgbụgba na ọnya ozugbo. Mpikota onu: Were ihe bandeeji kechie ya, na-etinyekarị bandeeji n'ime ngwa enyemaka mbụ. Bulie: Debe mmerụ ahụ n'elu obi gị iji belata ọzịza. Ntak emi Họrọ Anyị? 1 ...
Kedu ihe kpatara anyị ji ahọrọ gel ice pack iji belata ihe mgbu? Ma ị nwere mgbu mgbu site na ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ na ị na-afụ ụfụ site na ịwa ahụ, jiri naanị ice a maka olu na ubu mgbu. Aha aha: Gel Pad Ice Pack maka olu olu: 22 * ​​7.5 INCHES arọ: 800G ahaziri Logo na ngwugwu Asambodo: SGS, FDA, CE, REACH, PROP65, BSCI Ngwunye gel a na-agbanwe agbanwe mgbe oyi kpọnwụrụ, ka ị nwee ike idowe ha ikpere, ubu, na olu. Mgbe awa ole na ole gasịrị na friza, ngwugwu ice maka mmerụ ahụ g ...
Okwu Mmalite: satin ákwà mejupụtara ịkwanyere mkpuchi Size: 47cm n'obosara, 600g Agba: mgbe pink, agba nwere ike ahaziri ma ọ bụrụ na nke karịrị 2000pcs Ojiji: Mgbe shampooing, tinye mmiri ude evenly, eyi a disposable ịsa okpu, ma kpoo ahụ ite okpu na ọkara-elu ọkụ na ngwa ndakwa nri 2-3 nkeji. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ihe dị ka ogo 35-45, yikwasị ya ihe dịka 15 nkeji. Adabara perm, post-dai-elekọta elekọta, na-adị kwa ụbọchị ntutu àgwà mmezi. Ntak emi Họrọ Anyị? ...
Nghọta, ajụjụ ịnabata ịkpọ oge ọ bụla